SIDA LOO DHIGO DABACASAHA: SIDA LOO DHIGO KHUDRADDA SI LOO BADBAADIYO CIIDDA, SIDA BALKA AMA DHOOBADA MAQSIN EE XILLIGA JIILAALKA, KUWAAS OO NOOCYO KALA DUWAN? - WIXII MARTIDA
Karootada - keydka fitamiinada ee jiilaalka oo dhan. Sida loo keydiyo khudradda
Karootada waxaa ku jira qadar fara badan oo fitamiino iyo xubno raadraac ah oo faa'iido u leh jirka bini'aadamka. Waa hab fiican oo lagu ilaaliyo caafimaadka wanaagsan ee dadka waaweyn iyo carruurta.
Si looga faa'iidaysto dabacasaha, ma aha oo kaliya xagaaga, laakiin sidoo kale xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato shuruudaha ay tahay in la dhigo oo la dhigo. Kaydinta saxda ah, waa inaad u hoggaansantaa heerkulka, qoyaanka iyo qaabka hawo.
In our article waxaan ka fekeri doonaa si faahfaahsan sida loo keydiyo karootada. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Diyaarinta waxay bilaabataa guga, kahor intaan la dhicin. Wixii beeridda, miraha kala duwan ee u adkeysan kara nolol shafeeco dheer ayaa la door bidayaa.. Noocyadaas ayaa si gaar ah loo dhajiyay oo leh hanti la yidhaahdo tayada ilaalinta.
Baakooyinka ku yaala abuurka ayaa lagu muujiyay. Intaa waxaa dheer, tayada iyo ilaalinta karootada xilliga qaboobaha waxaa saameyn ku leh dhowr arrimood oo waaweyn:
xaaladaha cimilada xagaaga;
ku habboonaanta noocyada kala duwan ee gobol gaar ah;
Xallinta waajibaadyada xaaladaha kaydinta.
Noocyo oo la badbaadin karo waqti dheer
Karootada dabacsan ee dhirta ayaa ugu habboon kaydinta jiilaalka.kuwaas oo muddada Bisaylkiisa ah laga bilaabo 110 ilaa 130 maalmood, ama bartamaha-Bisaylkiisa, Bisaylkiisa ka soo 105 ilaa 120 maalmood. Noocyo kala duwan ayaa lagu kala soocayaa kaydinta ugu fiican xilliga qaboobaha, marka loo eego kuwa kale. Waxay qabaan iska caabin fiican oo qabow, waxay u yartahay inay u nugul yihiin cudurrada waxayna leeyihiin tayada ilaalinta fiican. Inta lagu jiro kaydinta, waxay haystaan ​​dhadhanka iyo tayada caafimaad.
Kuwa ugu caansan ee kaydinta muddada-dheer waa noocyada soo socda:
Haddii noocyada kala duwan ee aan la aqoon, ama bacda shinnida aan la keydinin, waxaa lagama maarmaan ah in la fiiriyo qaabka uu karooto. In hore karootada-Bisaylkiisa, foomka inta badan waa gaaban oo wareegsan. (Karootiga reer Paris) waxayna leeyihiin tayada ilaalinta xun.
Digniin: Wixii kaydinta xilliga qaboobaha, xididdada ugu habboon ee dheer, habic casri ah.
Siyaabaha lagu badbaadiyo dabacasaha
Waxaa jira habab lagu keydiyo oo lagu caddeeyo wakhtiga iyo dhaqanka.. Haysashada karootada waxay caawisaa:
dhadhanka geedaha qallalan;
basasha iyo basbaas;
qolof dhoobo ah.
Muhiimada ah ee karootiga calaamadda saxda ah ee jiilaalka
Kaydinta saxda ah iyo diyaarinta tas-hiilaadka kaydinta dabacasaha ayaa ah xaalado muhiim u ah nolosha shafka dheer, oo aan lahayn wax khasaare ah. Sida loo diyaariyo qolka:
Diyaargaroobiddu waxay bilawday hal bil ka hor inta aan la qorin. Ugu horreyntii, qolku waa hawo la gooyaa oo jeermis lagu buufiyo. Nidaamka jeermi-dilista waxaa lagu sameeyaa bambo-gacmeed ama burooyin.
Laba toddobaad gudahood derbiyada ayaa la caddeeyaa. Lime copper waa in lagu daraa xalka iyada lime lakulmo. Waxaa lagula talinayaa inaad ku qaadato 0.5 litir oo xal ah halkii 1m inta lagu jiro furitaanka.2.
Si looga fogaado lakabka iyo qalajinta khudaarta cagaaran, xaaladaha kaydinta gaarka ah waa in la fiiriyaa.. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Habka kuleylka aan ka hooseeynin -1ºS oo aan ka badnayn + 2ºS;
qoyaan qaraabo ah laga bilaabo 90 ilaa 95%;
hawo qabasho dhexdhexaad ah.
Waa muhiim: Xitaa isbeddel yar oo heerkulka ah wuxuu keeni karaa qalajinta, duufaan ama dhirta dalagyada xididka. At dabaqyada + 5ºS waxay bilaabaan inay biqilaan.
Sidee loo dhigaa khudradda Maqaasi, dhulka hoostiisa ama godadka garaashka?
Ka fikir sida loo dhigo dabacasaha muddada dheer ee kaydinta xilliga jiilaalka Maqsin, dhulka hoose ama qashinka khaaska ah.
Waa kuwa ugu caansan ee bannaanka u ah iyo ugu fudud. Caanaha ayaa awood u leh inay joogteeyaan heerkul deggan.Sababtaas awgeed, dabacasaha ma qallajin karo bakteeriyada waxyeelada lehna ma kobcin karto. Markaad dhigayso kaydinta qaboobaha, waxaad u baahan tahay inaad raacdo taxanaha:
Khudaarta cagaaran waxay ku kaydsan yihiin sanduuq alwaax ama balaastiig ah oo ciidda dhoobo ah. Dhulka waxaad u baahan tahay inaad ku darto biyo yar, ka dibna ku buufin ciidda leh qori buufin leh.
Dusha hoose ee taangiga waa inuu daboolaa lakabka ciidda 3 ilaa 5 cm.
Dalagyada rootiga waxaa la dhigaa meel saf ah oo ku taala sanduuqa fogaan ah 2 illaa 3 sentimitir midba midka kale. Ka dabool dabacasaha oo ciid ah si ciidku gebi ahaanba u daboolo xididada, oo wuxuu ku baahiyaa safka xiga ee xididdada.
Sii wad caleemo beddel ah ilaa weelka la buuxiyo.
Waxaan kugula talineynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan kaydinta karootada ee ciidda:
Geed ama geed dhoobo ayaa ku haboonaa kaydinta. Waxyaabaha ku jira balka matoorka phenolic ayaa ka hortagaya horumarinta bakteeriyada bakteeriyada, iyo sidoo kale ma oggola dabacasaha in ay Gagaashaan.
Sida weelka kaydka ah, waxaad doorbideysaa sanduuq alwaax ah (mugga illaa 18 kg) leh dabool adag.
Qeybta hoose ee sanduuqa waxaa ka buuxsamey balka dhoobada ee lakabka laba ilaa saddex sintimitir.
On dhadday si aad u jiifiso xididada. Karootada waa in aysan xiriir la wadaagin.
Lay lakabka ugu horeeya ee dabacasaha daboolay lakabka dhadhanka, gebi ahaanba daboolaya xididada.
Lakabka kale ee karootada iyo sida balka ah ilaa sanduuqa si buuxda u buuxsamo. Ka dib markaad ka soo saartid weelka leh khudradda xididka ah ee kaydinta Maqalka, dhulka hoose ama garaashka godadka.
Waxaan ku talinaynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan kaydinta dabacasaha dhadhanka dhaadheer:
In bacaha ee polyetene leh mugga ah 5 ilaa 30 kg karootada buuxsashada, buuxinta weelka leh dalagyada xidid by 2/3.
Ku rid bacda Maqaar ku taalla meel qoyan ku yaal shelf ama taagan. Bacda waa inay furan tahay sababta oo ah dabacasaha ayaa soo saaraya kaarboon dioxide. Heerka CO ee ballaaran ayaa ku urursan bacda xiran.2Taasi waxay horseedi doontaa karinta karootada.
Kaadida gudaha bacda waxay muujineysaa heerar sare oo qoyaan ah. Si looga fogaado isku dhufashada kondensate ee hoose, bacda hoose ee waa in la barbar dhigo oo u dhow lime waxaan ku dhejin karnaa qalab nuugi karo oo qoyaan badan.
In diirka basasha
In diirka basasha nolosha shelf ee dalagyada xidid waa isku mid sida sida balka. Waxyaabaha ku jira caanaha maaddooyinka lagama maarmaanka ah ma ogola in bakteeriyadu ay horumariso iyo habka loo ciribtiro.
Daboolka hoose ee bacda dunta ah leh lakabka weyn ee diirka basasha.
On top of khaanad jiifay xididada.
Ku dabool dabacasaha leh lakab qaro oo caano ah. Kala bedeli kartaa lakab ilaa bacda ay buuxsanto, lakabka lakabka diirka basasha.
Bacaha waxaa la geliyaa armaajooyinka ama ku dhegay ciddiyaha Maqsin.
Habkani wuxuu badbaadin doonaa karootada ilaa goynta soo socota.
Karootada waxaa lagu kaydin karaa dhoobo la qalajiyey. Qoryaha dhoobo dhuuban ayaa ka ilaalin doona xididdada laga yaabo in ay burburaan ilaa laga gaaro goosashada sannadka soo socda.
Half baaldi dhoobo ah oo biyo lagu qasi jiray.
Ka dib marka dhoobada barareyso, ku dar biyo badan oo isku walaaq. Cabbiriddu ma aha inay ka sii badan tahay labeen dhanaan.
Daboolka hoose ee sanduuqa ama filinka basket.
On saf ku jiifiso xididada, iska ilaalinta xiriirka kasta oo kale.
Lakabka koowaad ee karootada ku shub dhoobo. Ka dib markii dhoobo dhoobo, soo daaya lakabka labaad iyo ku shub dhoobada;
Loot daboolka si aad u buuxiso weelka.
Waqtiga Kaydinta Diyaarinta:
qaboojiyaha ilaa laba bilood;
bacaha polyetylen ilaa afar bilood;
ciidda ilaa siddeed bilood;
dhoobo, balka dhirta cagaarka ah, diirka basasha hal sano.
Marka dabacasaha iyo tufaaxyada la wada dhigo, karootada si dhakhso ah ayay u sii xumaaneysaa. Tufaaxa soodhawaxa ah waxay u taagan yihiin etylene, taas oo ka dhigaysa xididada aan ku habboonayn isticmaalka.
Guddi: Iskuduwidda joogtada ah ee dalagga, ka saarida dalagyada xididada la gooyey iyo jarida caleenta sii kordheysa waxay caawisaa nolosha sii kordhinta waxayna iska ilaalisaa khasaaraha dalagga.
Hirgelinta haboon ee dhammaan waxqabadyada loogu talagalay diyaarinta iyo kaydinta dabacasaha, waxay u oggolaan doontaa sanadka oo dhan in ay ku raaxaystaan ​​miraha casiir leh. Laga soo bilaabo hababka kaydinta la soo jeediyay, waxaad dooran kartaa ugu habboon. Guga, ku beeraan oo keliya miraha leh nolol shelf dheer.